अन्तर्वार्ता/विचारआइतबार, ७ आश्विन , २०७५
मन्त्रिपरिषद्बाट भर्खरै नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएका मदन खरेल भन्छन्, “दशैंमा ढुक्कसँग नेपाल एअरलाइन्सको टिकट काट्नुस् ।”
नेपाल वायुसेवा निगमलाई अगाडि बढाउने योजना के छ ?
भर्खरै दुइटा एअरबस–३३० विमान आएका छन् । साना–ठूला सबै विमानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो । तत्काल विमान नकिनेर भएकैको व्यवस्थापनमा जोड दिन्छौं । एअरलाइन्स कम्पनीले बजारको माग अनुसार विमान थप गर्नु नियमित प्रक्रिया हो, त्यसका लागि अध्ययन गर्छौं ।
निगमले कहिलेदेखि विमान उडाएरै नाफा कमाउला ?
वायुसेवा कम्पनीले अन्य सहायक व्यवसायको नाफाले मात्रै कम्पनी राम्ररी चलाएको छौं भन्न मिल्दैन । संस्थाभित्रका समस्या सुधार्दै निगमलाई नाफामा लैजान्छौं ।
नियमित उडान नहुने समस्या हट्ला त ?
निगमको समग्र अवस्थामा सुधार गर्न सकियो भने नियमित र तोकिएको समयमा उडान भर्न सकिन्छ । सबैको सहयोग लिएर कर्मचारी, इन्जिनियरिङ क्षमता, पाइलट, टिकट प्रणाली लगायतमा सुधार गर्नेछु । एक साताभित्र चालक दल व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना बन्छ ।
निगमसँग भएका चिनियाँ विमानहरू नियमित उडानमा छैनन् नि !
चिनियाँ विमान धेरै देशमा चलिरहेका छन् । तर, हामीकहाँ यसलाई लिएर प्रचारबाजी गरिएको छ । हाम्रो हकमा सपोर्ट सिस्टम राम्रो नभएर चिनियाँ विमान नउडेको हो । दशैंमा चिनियाँ विमान उडाउने गरी काम गरेका छौं । ढुक्क भएर नेपाल एअरलाइन्सको टिकट काट्न म आग्रह गर्छु ।
महाप्रबन्धकको कार्यकारी अधिकार तपाईंलाई दिइएको छ, काम गर्न समस्या पर्दैन ?
हामीबीच कुनै समस्या छैन । महाप्रबन्धक (सुगतरत्न कंसाकार) ले बोर्ड र कार्यकारी अध्यक्षले दिएको काम गर्नुहुन्छ । सुगतजीले पनि काम गर्न कुनै टसल नहुने बताउनुभएको छ । केही मिडियाले हामीबीच फाटो पार्ने असफल प्रयास गरेका छन् ।